Indawo yokuhlala yaseRoveggia (M023091965) - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yaseRoveggia (M023091965)
Kutshanje ukubuyiselwa kweflethi kukuphosa ilitye ukusuka kwiVerona Fair, enegaraji yabucala.
Le ndlu, emalunga ne-45 square metres, ibekwe kumgangatho wesibini kunye ne-lift, enegumbi lokuhlala elinekhitshi elidityanisiweyo, ibhedi yesofa ephindwe kabini, igumbi lokulala elineewadi kunye negumbi lokuhlambela elinezixhobo. Indlu ixhotyiswe ngabo bonke ubutofotofo.
Indawo yokuhlala inegumbi lokuhlala / ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo (iimbiza kunye neepani), ibhedi yesofa ephindwe kabini, igumbi lokulala elineewadi kunye negumbi lokuhlambela elinezixhobo. Ilinen yokulala kunye neetawuli zinikezelwa. Le ndlu ixhotyiswe nge-TV, i-hairdryer, umatshini wokuhlamba, i-ayina kunye nebhodi yoku-ayina, i-oven yombane, i-dishwasher, ifriji kunye nefriji. Igaraji yabucala ekhoyo (yeemoto ezinobungakanani obuphakathi) kunye nelifti. Into yokufaka umoya endlini.
Le ndlu ikwi-300 m ukusuka kwi-Verona Fair, ifikeleleka ngokulula ngeenyawo kunye neekhilomitha ezi-2 ukusuka kwiziko lembali laseVerona. Kufutshane neflethi kukho: ivenkile enkulu, ikhemesti, iiresityu, ipizzeria, ibha kunye nejim.
Kuyenzeka ukuba uqhagamshelane nomninimzi ngexesha lokuhlala ngenombolo yomnxeba yereferensi.